Ny fiainana eto an-tany,
Iaraha-mahita mahalala ;
Ny ambony lasa ambany,
Fanantenana, fahakiviana ;
Hehy, ranomaso mikoriana.
Mahatezitra, mampitony ;
Mila fandinihina hatrany,
Ny ambany, lasa ambony.
Raha dinihina sy jerena ;
Tsy maha mpaminany,
Tampoka eo mahasorena.
Lazaina ambara etoana ;
Maha sempotra, hisefoana.
Fiainana tokana, miavaka ;
Mila mifankatia hatrany,
Tsy tokony hifanavakavaka.
Tsy fiainana an-jato taona ;
Tsy maintsy mody ihany,
Rehefa tonga ny fotoana.
Dia fiainam-pandalovana ;
Miserana mandalo ihany,
Ny hiafarany fahalovana.
Fiainana ilàna an'i Tompo ;
Mba ho tretrika hatrany,
Sady mirana no manompo.
Date de dernière mise à jour : Lun 13 jan 2020